Sanhedrin no Dii Yesu Asɛm (Mateo 26) | Yesu Asetena
WƆDE YESU KƆƆ ANAS, ƆSƆFO PANIN DADA NO FIE
BERE A SANHEDRIN NO DE DII N’ASƐM NO, NA MMARA MMA KWAN
Bere a wɔguu Yesu mpokyerɛ te sɛ ɔdwotwafoɔ no, wɔde no kɔɔ Anas fie. Yɛbɛkae a, Yesu nkwadaaberem, ɔkɔɔ asɔrefie hɔ ne akyerɛkyerɛfo no kɔkasa maa wɔn ho dwirii wɔn. Saa bere no, Anas na na ɔyɛ ɔsɔfo panin. (Luka 2:42, 47) Anas fii so no, ne mma no bi nso bɛyɛɛ ɔsɔfo panin adwuma no bi, na saa bere yi deɛ n’ase Kaiafa na na ɔte so.
Bere a wɔde Yesu kɔɔ Anas fie no, Kaiafa nyaa bere boaboaa Sanhedrin badwa no ano wɔ ne fie. Sanhedrin badwa no mu nnipa 71 no, na ɔsɔfo panin a ɔte so no ne wɔn a wɔayɛ ɔsɔfo panin adwuma no bi pɛn ka ho.
Anas bisaa Yesu ‘asuafoɔ ne ne nkyerɛkyerɛ ho’ asɛm. Yesu maa mmuaeɛ tiawa sɛ: “Mekasa kyerɛɛ wiase no wɔ badwam. Mekyerɛkyerɛɛ daa wɔ hyiadan mu ne asɔrefie, baabi a Yudafoɔ nyinaa hyia; na manka biribiara kokoam. Adɛn nti na worebisa me? Bisa wɔn a wɔtee deɛ meka kyerɛɛ wɔn no.”—Yohane 18:19-21.
Ɔpanin bi a ɔgyina ho bɔɔ Yesu asom kaa n’anim sɛ: “Saa na ɛsɛ sɛ wobua ɔsɔfo panin?” Nanso na Yesu nim sɛ ɔnyɛɛ bɔne biara, enti ɔkaa sɛ: “Sɛ mekaa no bɔne a, di bɔne no ho adanseɛ; na sɛ mekaa no yie a, adɛn nti na wobɔɔ me?” (Yohane 18:22, 23) Afei Anas maa wɔde Yesu kɔmaa n’ase Kaiafa.
Saa bere no, na Sanhedrin abadwafoɔ no ano aboa; ɔsɔfo panin a ɔte so no ne ɔman no mu mpanimfoɔ ne akyerɛwfo no nyinaa hyiaa mu wɔ Kaiafa fie. Ná mmara mma kwan sɛ wɔbɛdi obi asɛm Twam afahyɛ da no anadwo. Nanso, Yesu ho adwemmɔne nti, na wɔasi wɔn bo sɛ, sɛ mmara so na wɔbɛbu mpo a, wɔbɛdi n’asɛm.
Yɛhwɛ sɛnea nneɛma kɔe no a, yɛhu sɛ na ɛnyɛ atɛn papa biara na wɔrebɛbu. Bere a Yesu nyanee Lasaro no, Sanhedrin no yɛɛ sɛ wɔbɛkum Yesu. (Yohane 11:47-53) Afei nso, nna kakra a na atwam no, nyamesom mpanimfoɔ no bɔɔ pɔ sɛ wɔbɛkyere Yesu akum no. (Mateo 26:3, 4) Enti wɔnnya nnii Yesu asɛm koraa no, na wɔabu no kumfɔ koraa ne sa.
Sɛ yɛde bere a wɔde kaa asɛm no to nkyɛn a, nea wɔde sɛee asɛm no koraa ne sɛ, asɔfo mpanimfoɔ no ne Sanhedrin abadwafoɔ foforo hwehwɛɛ nnipa a wɔbɛdi adansekurum atia Yesu. Wɔnyaa adansefo pii, nanso na wɔn adanse nhyia. Afei nnipa mmienu bɛkaa sɛ: “Yɛtee sɛ ɔse, ‘Mɛdwiri asɔrefie a wɔde nsa yɛeɛ yi agu na mede nnansa asi foforɔ a wɔamfa nsa ansie.’” (Marko 14:58) Saa adansefo no mpo ano anhyia.
Kaiafa bisaa Yesu sɛ: “Wonka hwee mfa nyi w’ano? Adanseɛ bɛn na yeinom redi tia woɔ yi?” (Marko 14:60) Nea adansekurumfo no kekae nyinaa, Yesu anka hwee. Enti Ɔsɔfo Panin Kaiafa faa adwene foforo.
Ná Kaiafa nim sɛ asɛm baako a Yudafo mpɛ sɛ wɔte koraa ne sɛ obi bɛka sɛ ɔyɛ Onyankopɔn Ba. Bere bi a Yesu frɛɛ Onyankopɔn n’Agya no, Yudafo no kaa sɛ ɔreyɛ “ne ho sɛ ɔne Onyankopɔn yɛ pɛ,” enti anka wɔrekum no. (Yohane 5:17, 18; 10:31-39) Kaiafa huu saa nti, ɔhyɛɛ da bisaa Yesu sɛ: “Mese wo sɛ ka nokorɛ wɔ Onyankopɔn teasefoɔ no anim; sɛ wone Kristo, Onyankopɔn Ba no a, ka kyerɛ yɛn!” (Mateo 26:63) Ná Yesu aka pɛn sɛ ɔyɛ Onyankopɔn Ba. (Yohane 3:18; 5:25; 11:4) Enti saa bere yi wannye antom a, wɔbɛfa no sɛ ɔmmu ne ho sɛ ɔno ne Onyankopɔn Ba anaa Kristo no. Yesu kaa sɛ: “Mene no; na mobɛhunu onipa Ba no sɛ ɔte tumi nsa nifa soɔ na ɔfiri ɔsoro mununkum mu reba.”—Marko 14:62.
Kaiafa tee saa asɛm no, ɔsuan n’atade mu wɔ abadwafoɔ no nyinaa anim kaa sɛ: “Waka abususɛm! Adansefoɔ bɛn bio na yɛhia? Hwɛ! Afei moate abususɛm no. Mosusu ho sɛn?” Afei Sanhedrin no de wɔn atɛnkyea no too dwa sɛ: “Ɛsɛ sɛ ɔwuo.”—Mateo 26:65, 66.
Wɔfirii ase dii Yesu ho fɛw bobɔɔ no. Ebinom nso bobɔɔ n’asom tetee ntasuo guu no so. Sɛ wɔde ade kata n’anim a, na wɔabɔ n’asom agoro ne ho sɛ: “Hyɛ nkɔm. Hwan na ɔbɔɔ woɔ?” (Luka 22:64) Onyankopɔn Ba paa na wɔdii n’ani saa no! Wɔannya bere papa biara nso anni n’asɛm sɛ anadwo a ɛnsɛ sɛ wɔdi asɛm.
Ɛhe na wɔdii kan de Yesu kɔe? Dɛn na ɛtoo no?
Ɛhe bio na wɔde Yesu kɔe? Ɛkwan bɛn na Kaiafa faa so maa Sanhedrin no penee so sɛ Yesu fata owuo?
Bere a wɔredi Yesu asɛm no, aniwude bɛn na wɔde yɛɛ no?